It will chock me, eesh!! Zvaune zimugofo chairo ndopapona here ipapa? Woita uchiziva kuti ndirimunhu mukuru, zvespeed yepwere kwete ini ndoda kunyatsonakirwa naro zimboro iri. I caressed her hair, down to the shoulders and… As usual, we used to chat neChimhamha pafacebook, icho chiriko mhiri kwemakungwa uko.
Tati tandarei tandarei ndakakumbira 4to ndikatumiriwa passport size 4to, vakomana here, nyunguru spagada muto unema ma, kune mai dzinobvumwa nerunako, kana paakati ave ne50 years ndakati ndonhema manje idzi, because she looked like she was 30years. Aingoonekawo kana nepapicture pacho kuti haasi vana muti ngauwe tiwane tsotso. Ndakatarisa 4to so mboro ikapinda pachaa!! One time nekuona 4to chete.
Chakanetsa manje I distance because chimhamha chinogara ku Leicester city, apa in ndakatyora zvangu Nicasberg nanawasu. Saka dzaingovawo shuviro dzemboro yemufudzamombe kurota achikwira the queen of England.
Ndaifanira kuziva kuti zviroto zviroto…. Ndakaramba ndichisesedzana nacho chimhamha changu, ndaive mudiki zvangu nemakore angavavarira 8 kana 10, but to me age was just a number. Ndakaramba ndiine hope yekuti one day kumusha kuchafiwa nehama yepedyo there will be a necessity yekuti aroverere paZvavahera apa, pana sekuru Muzee mapazivaka?
Ehe chana chatete chaicho, but the chance did not come. Pakashaya kana aibatwa nefluu zvake. Ndakazotumirwa a full picture yaakatorwa ari pashopping, vanhu regai ndikuudzei, never underestimate the power and impact of image. Ndakatendera musoro ndakatarisa computer so, ndichiona chimhamha chineflat tummy, kachiuno kanenge igo, mabums nezviboda here vadikani? Ndohanzvdzi dzedu dzaiteverwa nana Lobengula idzi. Usina kumbotarisa face kungoona ushe hwekunze chete waigutsikana. Kuzoti mukaka wacho, waimboita kunga wemunhu ane50 yrs here?
Apa ichiratida kuti ilong chase wena. Mifananidzo yakadaro ndoyekuti ikawnikwa nana handsome haa the job will be easy. Hanti munovaziva here vanahandsome? Ko murikurasika papi? Hanti when people are engaed in a group sexual act , the act inopihwa mazita zvichienderana nenumber yevanhu vari involved. Twosome, kana kuti threesome, zvichingodaro daro.. Anyway back pana chimhamha, intrest yakaramba ichikura bit by bit as we chated, munogoziva vakadzi vemazuvano vakudada ne age zvisingaite.
Ndakambonzi uri mwana mudiki, uri size yekukuwash wangu … imwe iya iya. Asi cherudzi rwaana mukanya change chabata. Chimhamha was so entertaining, tichigara tichingopromisana ma fireworks, but I am sure we all knew that what we were saying was never going to happen in the near decade or so.
Love moto chaiwo, chimhamha chakabatana mhani imi. Rimwe zuva ndakatovarairwa zvangu ndakatyora pachibasa changu chandinoshanda ndakavhundutswa nemassage yakakandwa nechimhamha zvikanzi will be in SA for two weeks, looking forward to see you there. Ndakarohwa nehana ndikati vakomana yedu yekushaawo mari iyi, ndaikuenda nei kuSouth Africa kwacho apa cash zero.
Ndakambopromiser promise, but the problem is ukanyepa hakunonoki kuedza. Days of meeting Chimhamha fast approached zvekuti ndakaga ndisina yekutamba. Apa ndanyepa nyepa nhema dzose dzapera manje, it was time for the truth. Apa ndopadzange dzawira mutswandaka apa.
Ndakazorovera moyo kudombo, ndikati inzwaika chimhamha changu chandinodisa kwazvo, mufesi wenyu ndiwanga tsuro yemubhuku inofamba zvayo nemapeji, Ndakatenser ndakatarisira the explosion, but alaas, she remained cool and asked me if I had a passport, ndikatiwo haiwa hurombo huro hawo asi passport yaivepo.
Zvikanzi that was fine akatora address yangu and in three days time I had received my air ticket kuenda pandazo apa. I was going to be booked paSanton hotel for one week. Monoziva christmass inonguya early early so kana mafaro akufarirawo. This was my first time kukwirawo ndenge ndakanang paJoza apa kunoona Chimhamha changu. I checked in at around hrs and pamakeys angu pange paine kanote kange kakanzi 4n this number kana wangosvika.
Ndakadzibaya baya number dziya ndikataura Chimhamha kuti ndainge ndasvika. Akangoti two minutes. Ini less than two minutes there was a hesitating knock at the door, I shouted a come in and the door responded by opening. Baba vangu soko imi!! Mukaka wemukadzi uno muchena akachana kuti mbuu, kana ruri runako ndichataureiko hama dzangui, ganda racho chete handifungi kuti raigezwa nemvura ini, Vamwe vakadzi kana vakukura zvekusvika kumazera andataura aya vanoita chimimba mutekwe, but Chimhamha had a flat tummy and a fit body.
Simple dressing yaanga akarova ndoyakazondinyu nguditsa moyo manje, akange akarova zvake kablousers kasina maoko, nekaskirt twuya twunonamirana nemuviri but kari decent, nemarafters mumakumbo.
She smiled exposing her milky white teeth before disappearing again inside her average sized lips aiita kunge akachekererwa, mai vanemalips akanaka ivavo. Ndakaramba ndakavatarisa ndikashaya action as she softly closed the door behind her.
It was very easy for her to say you are not my class, and ndochaive chokwadi. We were very happy to have finally meet phyisically, pfungwa dzangu dzaingoti nhongai nyama mukanya panosvika vaenzi zvikanetsa izvi, because aigona kungochinja munyati anytime. Looking at her was as if i was looking at an angel, was she the same woman I used to see on pictures?
I wondered. Amazing, dazzling and charming woman. Ne attire yanga akarova ndakaoona softness yenyama dzake as she calmly relaxed akazembera zvake pabig pillow neback yake as we chatted tuma sweet nothings. Maziso angu anga aribusy kutsvaga pekutangira, pfungwa dzangu dzange dzakungofunga beche chete hapana chimwe chandange ndichafunga. Mai vanegumbo ivavo rinenyama dzakaregedzera dzakapfava, ndaitoonachisumbu chebeche chakaita kuzvimbirira ndikakaruka ndakumedza mate with lust.
Ndakapa kutenda ini mai vanemuviri wavo wakabatana ivavo, ndakanzwa muviri wangu kubatwa nechivveve. Ndakaona unyanzvi hwaMwari pakusika munhukadzi, varume ngatisadhererai zvimwe zvinhu vakadzi vakanaka ava mhani.. Nguva yese iyi ainge achitaura zvake akatsinzinira, paakasvinura achichisimudza musoro takasanganidzana maziso, Our eyes locked followed by smiles as we drew closer to each other, I put my hands around her and she did the same, vana I missed you so much handichataure kuti zvakataurwa kangani, kana ivo vana am I dreaming haa chiregai ndinyarare zvangu nekuti dzimwe nguva rudo runoita vanhu vahumane so.
I think she attended a school of kissing, And Chimhamha chinononyatsoziva pekubata nenguva yekupabata. In a few minutes she had taken over the leading role and change chakakuvara nezemo because ndakanzwa kufema kwacho in no time ange ave mu heavy breathing mode.
The the lovely attack on my lips get more and more aggressive and our bodies, minds and souls got deeply engrossed and locked into each other. She sucked the inner parts of my lips achiita kunge arikufenga muto wenwiwa mudemhe, akazonodhonza the tip of my tongue muviri wese wakati zharara, tese takasimukirana nguva imwechete takanamana miromo kudaro, and in less than a minute we were all stuck naked in our chocolate colored birth suits.
Apa panga pasisina zviya zvekufungidzira zvandaisimboita ndakatarisa mapictures echimhamha changu, yanga yave ferereferere.. Ndisati ndambofunga zvekuita she held me tight one ruoko right across pamusana, rumwe nechepamafudzi ndaobva asimudza rimwe gumbo akarivhura wide bringing our pubic area to contraction and she started slowly squeezing in, this was so intense, ndakamboita romance asi chemusi uyu hamba yanga yasangana neanedemo.
I excused my lips from hers and started softly kissing her neck and she mourned with pleasure, ndikamudzvanya dzvanya kumusana zviri slowly but zviine authority. Maziso achimhamha akatanga kuchinja achitsvuka apa akajengerera tumisodzi. Ndakadzika hangu zvishoma nezvishoma ndakanagana pazvimatende zvemazamu ndakanoita sendinoriruma ndorisveta ndisina kusvika patuma tits. I avoided the black spot inoiswa nemwana mukanwa iya kana achiyamwa.
Ndakaachinjanisa apa chimhamha change chakuchemrera nekunakirwa manje, ndakaramba ndichidzika rurimi ruchishanda basa, I liked the skin, unoziva kana ganda remukadzi rakatsetseka rakachena uchinyanyotsonzwa the human sent not perfume, unofa nekunakirwa. Pandakannga ndakunonosvika pasi peguvhu apa ini ndange ndapfugama, gumbo riya rekusimudzwa rakanzi koche pafudzi pangu and ndakaona matinji akazvimbirira achipenya anyatsopatsanurana kunge hwanda rembudzi.
They were appealing to be accommodated in my mouth. But not for now. I pushed her backwards at the same time ndichisimudza rimwe gumbo range rakatsika pasi ndiya manhede jaa pabed. Opened her legs wide, Ndakasvasvavira condom muhomwe yejean rangu ndikaritsemura ndakuda kunoripfeka ndakaribvutirwa zvikanzi siyayi ndiite basa rangu daddy. Akatarisana nayo hwandamakwakwa yemboro yakashatiswa nematsinga akaipoteradza poteredza. I caressed her hair, down to the shoulders ndakakotamira achisvisvina nekusveta mboroyangu zvinyoro nyoro.
Kupaparika hakusi kugona romance maface angu. Ndakadyiwa mboro Hararre yese hapana anodyira mboro nechana chatete ichi. Nainzwa ndichida kuitsemura mheche too bad. Akaipfekedza condom ndokushadabura gumbo rumwe ruoko ruchiinangisa pabeche Ini ndakamira paedge yebed iye arimanhede makumbo ake aripamafudiz angu.
Ndakainzwa mboro ichinyura zvishoma nezvishoma mubeche raidziya zvekuti dnakambofunga kuti asi condom radambuka. Iye achiita kuvhundukira kunge chisikana chirikurwadziwa nekubviswa humhandara… Pasina nguva mboro yese had disappeared mubeche make, akati ndimbomira kukoira achinyatsoterera the unpresidented penetration depth.
Takati zii takadaro beche rake raiiita kuvhita vhita neukasha ndichinzwa richimana mboro nekuiregedza. Akazotanga kuita movement iye ini akanditi ndirambe ndakamira stand still. Akaikurunga slowly anti clockwise anda clockwise achichinjanisa. Ndakangoerekana ndakurova chiro zvinekaunyanzvi zviya izvi. Ko isu vanamukanya ndozvega zvinotibudisa ziya negym chete, In 6 minutes Chimhamha change chatogwinha gwinnha chichistunya nekuunganidza masheets chichishaya pekubata.
Ndakawedzera speed ndichiregedzera makumbo ndichibata tuma tits.. Oh maiwe!!! Chakagomera zvine power chichitunda and this triggered me also. Vhiki rese rakapera ndichidya nambo ini. Chakagomera zvine power chichitunda and this triggered Rate This.
Vanhu vazhinji havazivi kuti vane chirwere chepabonde nokuti vanotaridzika uye vanonzwa zvakanaka uye havana zviratidzo. Nzira imwe chete yekuve nechokwadi ndeyekutariswa nachiremba. Zvirwere zvepabonde zvakasiyana zvinotariswa nenzira dzakasiyana. Izvi ndizvo zvinotariswa: weti yako inotariswa ropa rako rinotariswa donje rinoshandiswa pakutarisa utachiona panhengo dzako dzakavandika Unogona kutariswa chimwe chete kana kuti zvese zviri zvitatu.
Chiremba wako achakuudza kuti unofanira kutariswa chii. Zvirwere zvepabonde zvinogona kurapika here? Zvimwe zvirwere zvepabonde zvinogona kupora nokukurumidza uye nyore nyore nemishonga.
Zvimwe zvinogona kurapika asi hazviperi. Unogona kuwana chirwere chepabonde zvakare kunyange wakamboshandisa mushonga chirwere chepabonde chikarapika. Ndinofanira kutariswa rini? Unofanirwa kutariswa zvirwere zvepabonde kana: ukaita zvepabonde kungava nekuzasi, nemuromo kana nekunobudisa tsvina pasina kondomu une chero zviratidzo uri kunetseka nezvehutano hwako hwepabonde uchifunga kuti unogona kuva nechirwere chepabonde kondomu rako rakaputika kana kubva panguva yepabonde iwe kana mumwe wako waita zvepabonde nemumwe munhu iwe kana mumwe wako wakaita zvepabonde nevamwe vanhu munguva yakapfuura uchishandisa tsono, majekiseni, zvipunu pakuzvibaya zvinodhaka zvakamboshandiswa nevamwe vanhu ukatanga kurara nemumwe munhu mutsva Chii chinonzi kutariswa STI?
Kutariswa kwacho hakutori nguva, hakurwadzi uye haubhadhari mari. Varume nevakadzi vanotariswa zvakasiyana. Chiremba kana mukoti anotora mvura yemumuviri, somuenzaniso, weti, mate, mvura inobuda panhengo yemudzimai, kana ropa.
Zvimwe zvacho unogona kuzvitarisa pachako. Zvinotora vhiki imwe chete kana maviri kuti uzive mhinduro. Kana zvikabuda kuti une STI, chiremba achakupa mishonga inokurumidza uye iri nyore kushandisa. Yeuka, zvimwe zvirwere zvepabonde zvinogona kurapwa asi hazviperi. Ndinofanira here kutaurira ani zvake ndine STI? Unofanirwa kutaurira mudiwa wako wepabonde, uye anofanirwawo kutariswa.
Kana mudiwa wako wepabonde akasatariswa nekunwa mishonga, munogona kuramba muchipanana STI. Kana usingakwanisi kuudza mudiwa wako wepabonde, bvunza chiremba wako kana mukoti kuti avataurire. Havaudzi mudiwa wako nezvako. Haufaniri kutaurira.
Ndohanzvdzi dzedu dzaiteverwa nana Lobengula idzi. Usina kumbotarisa face kungoona ushe hwekunze chete waigutsikana. Kuzoti mukaka wacho, waimboita kunga wemunhu ane50 yrs here? Apa ichiratida kuti ilong chase wena. Mifananidzo yakadaro ndoyekuti ikawnikwa nana handsome haa the job will be easy.
Hanti munovaziva here vanahandsome? Ko murikurasika papi? Hanti when people are engaed in a group sexual actthe act inopihwa mazita zvichienderana nenumber yevanhu vari involved.
Twosome, kana kuti threesome, zvichingodaro daro. Anyway back pana chimhamha, intrest yakaramba ichikura bit by bit as we chated, munogoziva vakadzi vemazuvano vakudada ne age zvisingaite. Ndakambonzi uri mwana mudiki, uri size yekukuwash wangu … imwe iya iya. Asi cherudzi rwaana mukanya change chabata. Chimhamha was so entertaining, tichigara tichingopromisana ma fireworks, but I am sure we all knew that what we were saying was never going to happen in the near decade or so.
Love moto chaiwo, chimhamha chakabatana mhani imi. Rimwe zuva ndakatovarairwa zvangu ndakatyora pachibasa changu chandinoshanda ndakavhundutswa nemassage yakakandwa nechimhamha zvikanzi will be in SA for two weeks, looking forward to see you there. Ndakarohwa nehana ndikati vakomana yedu yekushaawo mari iyi, ndaikuenda nei kuSouth Africa kwacho apa cash zero. Ndakambopromiser promise, but the problem is ukanyepa hakunonoki kuedza. Days of meeting Chimhamha fast approached zvekuti ndakaga ndisina yekutamba.
Apa ndanyepa nyepa nhema dzose dzapera manje, it was time for the truth. Apa ndopadzange dzawira mutswandaka apa. Ndakazorovera moyo kudombo, ndikati inzwaika chimhamha changu chandinodisa kwazvo, mufesi wenyu ndiwanga tsuro yemubhuku inofamba zvayo nemapeji, Ndakatenser ndakatarisira the explosion, but alaas, she remained cool and asked me if I had a passport, ndikatiwo haiwa hurombo huro hawo asi passport yaivepo.
Simple dressing yaanga akarova ndoyakazondinyu nguditsa moyo manje, akange akarova zvake kablousers kasina maoko, nekaskirt twuya twunonamirana nemuviri but kari decent, nemarafters mumakumbo. She smiled exposing her milky white teeth before disappearing again inside her average sized lips aiita kunge akachekererwa, mai vanemalips akanaka ivavo. Ndakaramba ndakavatarisa ndikashaya action as she softly closed the door behind her.
I wondered. Amazing, dazzling and charming woman. Ne attire yanga akarova ndakaoona softness yenyama dzake as she calmly relaxed akazembera zvake pabig pillow neback yake as we chatted tuma sweet nothings. Maziso angu anga aribusy kutsvaga pekutangira, pfungwa dzangu dzange dzakungofunga beche chete hapana chimwe chandange ndichafunga.
Mai vanegumbo ivavo rinenyama dzakaregedzera dzakapfava, ndaitoonachisumbu chebeche chakaita kuzvimbirira ndikakaruka ndakumedza mate with lust. Ndakapa kutenda ini mai vanemuviri wavo wakabatana ivavo, ndakanzwa muviri wangu kubatwa nechivveve. Ndakaona unyanzvi hwaMwari pakusika munhukadzi, varume ngatisadhererai zvimwe zvinhu vakadzi vakanaka ava mhani.
Nguva yese iyi ainge achitaura zvake akatsinzinira, paakasvinura achichisimudza musoro takasanganidzana maziso, Our eyes locked followed by smiles as we drew closer to each other, I put my hands around her and she did the same, vana I missed you so much handichataure kuti zvakataurwa kangani, kana ivo vana am I dreaming haa chiregai ndinyarare zvangu nekuti dzimwe nguva rudo runoita vanhu vahumane so.
I think she attended a school of kissing, And Chimhamha chinononyatsoziva pekubata nenguva yekupabata. In a few minutes she had taken over the leading role and change chakakuvara nezemo because ndakanzwa kufema kwacho in no time ange ave mu heavy breathing mode. The the lovely attack on my lips get more and more aggressive and our bodies, minds and souls got deeply engrossed and locked into each other.
Chibva wamubvisa bhurugwa, iwe wobva wabvisawo underwear yako, wosvitsa muromo wako pa matinji. Madyirwo ematinji ne kabinz anoda kutsanangurwa ne kuti vazhinji apa vanozoita zvinoita put off, kana kuti ivo vanotanga kusema nekuti havazive maitirwo azvo. Pazvikamu zvichatevera tichadzidzisanawo nemadzimai kuti vangageza sei zvinhu zvavo kuti zvichene uye zvipere mweya, kuti pave nerusununguko pamutambo uyu.
Asi variko vakawanda vanogona kugeza vachichena kwazvo. Rurimi rwako ngarwutambise tambise matinji ruchikwenya kwenya kabinz zvekare. Shandisa rurimi nemalips chete. Kana matinji or kabinz zvazvimbirira, kana kuti mukadzi asisina kugadzikana nekuda kusvirwa, vhara mazino ako nemalips, zviya zvaunoita kana uchitamba nekamwana kacheche pakanoisa minwe yake mukanwa mako, iwe wonyebedzera kukaruma asi wakaviga mazino ako seri kwemalips ako.
Ita sekuruma matinji nenzira iyoyo, uchiadhonza zvinyoro nyoro uye kuapressa nemalips ako zviri firm. Kana matinji akati kurei ita kuti rurimi rwako rwukwenye kwenye piece yematinji inenge iri mukanwa paunenge wakaruma marumire andataura. Ita izvi uchianhonga one, one then wozoadaro ese pamwechete. Itawo izvozvo kukabinz. Paunenge uchiita izvi tagbanua name meaning kuti rumwe ruwoko runge ruchitamba nenyato kumazamu uko, uku nerumwe ruoko uchifambisa fambisa zvigunwe pabeche, uchiita uchipinza nekuburitsa chigunwe one kana two mukati.
Usarume matinji ne mazino chaiwo. At this stage anogona kutunda kamwechete kana kaviri. Uchenjere kuchemdza mwana wevaridzi…. Ko zvakaipei?
Ndiko kuti kunakirwaka. Apa beche rake rinenge rava kuida kwazvo mboro but usamhanye. Dzokera kumazamu nemagaro uye ne kukisa. Unoita izvi because paanotunda paya anopera simba mbijana saka unofanira kumupa kanguva. Pedzisira nekuyamwa matinji zvekare asi not kumu tundisa this time. Just kumu heater. Chigadzirira kuipinza manje. Paunenge wava kuda kupinza imbokwiza kabinz kacho nemusoro wemboro seuri kupotsa buri. Paunozopinza usaise yese.
Koira zvinyoro nyoro, uye wakaisa musoro chete. Ziva kuti munhukadzi haangonakirwi kubeche chete during sex asi ne dzimwe nhengo dzemuviri kusanganisira ma tits, magaro uye matinji saka paunenge wapinza musoro chete ita kuti maoko ako abate bate zvinhu izvozvo, uchiteerera kuti chiri kumupa kuchemerera kwakanyanya ndechipi. Kana uchigona one hand should be pa one zamu, muromo wako on another, then rumwe ruoko pamatinji.
Usakanganwe kupuruzirawo kana kuita eku gukuchira magaro. Apa chibva wati pinzisei but half chete, kwete yese. Uku uchikoira zvishoma nezvishoma.
Allow her kutunda at least twice usati waipinza yese uchingoita zvandareva. Apa anenge ambotunda kare paunenge wamunanzva matinji usati waisa, saka anenge atosvitsa three or four orgasms kare. Paanotunda kechi 3 ikako usamhanyira kupinza yese kwacho.
Iburitse yese panze woita seunotangazve foreplay. Anotanga kudziya panyowani, kuitira kuti aite recover from that orgasm. Kana adziya chiisa yese but zvinyoro nyoro.
Koira zvine kasimba mbijana kwete hasha too much. Ipapo chibvumira mukadzi to take control because she will be going for her final orgasm. Vamwe vavo at this point vanoda kuuya pamusoro. Allow her to do that. Vamwe havaende pamusoro but ndiye anenge ava muridzi weku koira ari pasi ipapo. Rega akoire iye asi iwe haubve wati zii. Koira zvekutevedzera zvaari kuda. This is because kukoira kwake ipapo anenge achitevedza kune G-spot yake.
Ndiko kwaanenge achinangisa mboro painenge iri mukati. Iwe ziva zvekuyamwa mazamu nekupuruzira magaro kana ari iye ari pamusoro uye tuma small kisses. Chenjera kuti hauzokoira zviri out of order ukamu disappointa nekumutadzisa kui endesa paari kuda. Uchaona kuti anenge ava kufemera padenga uye kuita zvinesimba kana kuridza mhere. Paunoona kuti ava kuda kutunda mupe deep kiss, wakabata magaro. Usabvisa kiss kusvika apedza kutunda. This fourth orgasm inenge iri very explosive.
Kubva kuvhudzi kusvika kutsoka anenge ari magetsi ega ega. Iwe imbomira kutunda ipapo. Hold on. Siya atunde ega. Paanopedza kutunda chimira kukoira kuitira kuti iwe usatundewo, asi kiss ngairambe yakarumwa. That is the strongest of all orgasms anogona kuitwa nemukadzi. Imboti zii irimo ichiita kuvhita nekumira. Izvozvo anozvida chaizvo. Hazvina kunaka kukurumidza kuburitsa achangopedza kutunda. Vamwe vavo havatozive kuti kune this type of orgasm. Vajaira tuma orgasm tunenge twe bonyora.
Kazhinji kacho zvinokonzerwa neku kurumidzisa kutunda kwatinoita, tobva tashaya simba rekusvitsa munhu patinofanira kumusvitsa. The problem is that kana akasangana ne murume anomusvitsa ipapo ka one, obva aziva kuti pasi pano pane zvakadai, hamugoni kumudzora.
Vakadzi vanosangana ne experience ye orgasm iyoyi ka shoma kuti vazotamba vachiita bonyora netuma toys twekutenga. Anenge oti paafungira kukwirwa anenge otoda ari murume chaiye chaiye, kwete zvema rubber ekutenga kushop. Then choose one of the following positions: kumupfugamisa kana kumukotamisa woisa nekumashure; kana kuti kana asiri mukobvu stereki ngaarare nemusana, osimudza makumbo ake mudenga.
Paunopinda pakati pemakumbo ake ita kuti makumbo ake auye on your shoulders. It means kuti paunosvika pabeche pake makumbo ake anenge akakochekera on your shoulders, aka pushwa kuenda kumusoro kwake. Beche rinenge rakaita kuzviyanika kana kuti kuzvipereka in that position.
Saka ndati zvinoda vasina muviri mukuru. Kune vamwe vakobvu asi vaine muviri uri flexible vanogonawo this position. Kana ari mumwe wevakadaro unofa zvako nekunakirwa. Ita kuti atambanudze maoko ake ese ari maviri semunhu ari pamuchinjikwa, iwe wobva waabata sezvinonzi uri kumurambidza kumuka zvenharo… holding her down on her wrists or palms, like you are pinning her down. Chiita zvekurova nekusakadza nyini, uchienda mberi nekudzoka shure deep thrustsuye kumboramba wakaisa mberi mberi uchiita ma short movements, usingapi beche mukana wekupinda mhepo.
Pamwe pacho ita seunoitenderedza mukati imomo, kana kuita seuri kukokota mu cup ne spoon. Kana ukagona kusvira nguva yakati rebeyi usati watunda mukadzi anoita another bonus orgasm and iyoyi she will respect you for it, but its not easy ipapo because anenge ava weak, but kunakirwa anenge achiita seacha pesana pfungwa mwanasikana.
Mutarise mumaziso chaimo 12dpo bfn ka kufinyama paunenge uchiita zvese izvi.
Consumer awareness project for class 10th pdf
Functions of endoplasmic reticulum class 9
Posted in Mishonga ye kudhonza matinji
thoughts on “Mishonga ye kudhonza matinji”
11.08.2021 at 13:48
16.08.2021 at 08:16